यो पाराको मनाईले त कतै मौलिक संस्कृति नै धरापमा पर्ने त हैन ? | NewsMissile.com
यो पाराको मनाईले त कतै मौलिक संस्कृति नै धरापमा पर्ने त हैन ?
Newsmissile December 31, 2017 विचार, समाचार, संस्कार / संस्कृति0Comment
पछिल्लो समयमा पश्चिमा संस्कृतिहरु नेपालमा सजिलै प्रवेश गराईएका छन् । त्यसको लागि नयाँ पुस्ताका हामी सबै जिम्मेवार छौँ । अरुको संस्कृतिको सोच विचार नगरी शिरोधार्य गर्दा आफ्ना मौलिक संस्कृति र परम्परा ओझेल पर्दै जाँदा पछि कतै हाम्रो आफ्नो नेपालीपना नै गुम्दै जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
तथापी अरुको संस्कृती अंगालेर मनाईदै गर्दा आफू को हो र आफ्नो मातृभूूमी कुन हो भन्ने चाहिँ बिर्सनु भने हुदैन । कसैलाई शुभकामना दिनको लागि कुनै विशेष दिनको आवश्यकता त पर्दैन। नयाँ इस्वी सम्वतको अवसरमा शुभकामना रुपी शब्दहरु अर्पण गर्नु नराम्रो त हैन तर आफ्नो वि.सं. मा भन्दा बढी यो नयाँ वर्षमा गरिन थालेको हुँदा कताकता केही लेख्न मन बाध्य बनाएको हो ।
हामी मध्ये जोसुकैले जतिसुकै सफलता हासिल गरेता पनि, विश्वको जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै ठूलो आशनमा आसिन भएता पनि नेपाली आमालाई कदापी विर्सन सकिँदैन। यसको अर्थ यो हो कि हाम्रो नेपाली कला, संस्कृति र यहाँ आफ्नोपन सधै हामीसँग नै रहेको हुन्छ । लोक पारखी समुदायमा जन्मेको एक व्यक्तिले आफूूलाई जुनसुकै तरिकाले पश्चिमा अर्थात अरु भाषाका गीत सुनेर मनलाई आनन्दित तुल्याउन खोजेता पनि लोक सङ्गितबाट जति आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ, अरुबाट नपाउन सक्छ ।
त्यसैले हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आफ्नो देश भित्रको चालचलन तथा संस्कृति अनि मात्र अरु देशको तर्फ लाग्नु उत्तम हुन्छ। यसो गर्न सकेमा देश गुनाको भेष मात्र हुने हैन आफ्नो मातृभूूमी प्रतिको सम्मान पनि हुनेछ र अनन्तकालसम्म आफ्नो छुट्टै पहिचान पनि रहिरहने छ। यसको लागि यति बेला हामी जहाँ छौं, स्वदेश तथा विदेश, शुभकामना प्रकट गर्नु नराम्रो हैन तर नेपाली नयाँ वर्षलाई लात हानेर ई.सं. लाई नै नयाँ वर्षको रुपमा लिनु हुदैन ।
यो खालको मानसिकता हामीभन्दा अघिल्लो पुस्तामा भन्दा नयाँ पुस्ता बढी देखिन थालेको हुँदा हामीले आफू भन्दा साना भाईबहिनीलाई आफ्नो मौलिकताको बारेमा पनि जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।
– भेषराज पाण्डे
Previous संगठनकै कारण चुनावमा हार व्यहोर्नुु परेको निश्कर्ष
Nextस्वस्थानी व्रतकथा शुरु